के तपाई लाइ थाहा छ २० वर्षकाे उमेरमा के चाहन्छन् महिला – Ramailo Sandesh
अंग्रेजिमा एउटा भनाई छ “वुमन इज अ फराइन ल्याण्ड”, अर्थात महिला बुझ्नै नसकिने प्राणी हो । महिलाले साच्चिकै जिवनमा के चाहन्छ ? त्यो पनी २० वर्षको योङ्ग उमेरमा । यो आफैमा अनुत्तरित प्रश्न हो । महिलाले यो टिनएजमा केही निश्चित चिजहरु चाहन्छन् । जस्लाई तपाइँ हामिले उनिहरुको सामान्य व्यावहारबाट पनी थाहा पाउन सक्छौँ । के हुन ति चाहानाहरु?
भोलि कार्तिक १४ गते आईतबार , कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !